Gurukota reSaudi reKushanya rakangobhadharisa Mukadzi Anesimba Mukushanya, Gloria Guevara
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Gurukota reSaudi reKushanya rakangobhadharisa Mukadzi Anesimba Mukushanya, Gloria Guevara
Nhau Nhau • Awards • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Investments • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mazhinji epasi rose ari kunetsekana nekuchengetedza kushanya mubhizinesi, nepo Saudi Arabia ichiisa mazana emamirioni kuti iise humambo senzvimbo yepasi rose muchikamu ichi. Kuhaya mukadzi ane simba kwazvo mukushanya, CEO weWTTC Gloria Guevara semupi wezano kugurukota anoratidza kuti nyika yakakomba, uye zvinangwa zviri pachena.
Gloria Guevara anga ari gurukota rezvekushanya kuMexico, akazove CEO weWorld Travel and Tourism Council (WTTC), uye zvino achaenda kuSaudi Arabia kunopa zano gurukota rezvekushanya, HE Ahmed Al Khateeb.
Saudi Arabia iri kuda kugadziriswa mukuona kwekodzero dzevanhu, kuenzana, uye kuvhurika, uye kuhaya Mai Guevara kunogona kuratidza kuda kudzidza uye kuchinja.
Saudi Arabia iri kuve muzinda wekushanyirwa kwenyika nemahofisi ematunhu neUNWTO, WTTC, Global Resilience uye Crisis Center, nevamwe vangangoteedzera.
World Kufamba uye Tourism Council (WTTC) CEO Gloria Guevara achangopedza musangano wekutanga wepasirese panguva yechirwere cheCOVID munyika yekwake, Mexico, kuCancun. Saudi Arabia yakaita chinzvimbo chakakosha mumusangano uyu kuunza nhume hombe dzinosanganisira gurukota rezvekushanya kwehumambo, Anokudzwa Ahmed Al Khateeb.
Gurukota rakabatwa zvakanyanya seVIP. Akagamuchira kuwanda kwakawanda kubva kuWTTC CEO. Iye zvino Gloria Guevara ari kuwana mubairo wake kubva kugurukota reSaudi.
Cancun ndipo pakatanga runyerekupe pamusoro paGuevara achifunga kusiya basa rake semukadzi ane simba kwazvo mukushanya semukuru weWTTC kuti ave chipangamazano chegurukota reSaudi Arabia. Gloria panguva yakataurwa eTurboNews:
Runyerekupe - kwete chokwadi kunobva - Asi chete runyerekupe!
Runyerekupe, zvisinei, rwakave rwechokwadi apo gurukota reSaudi rekushanya rakamugamuchira kuchikwata chake nezuro.
Makorokoto ari kuuya. Mutungamiri wekutanga weWorld Travel and Tourism Council akaudza eTurboNews nhasi:
“Rimwe basa rakajeka kushamwari yangu Gloria Guevara…. Kwete chete mukadzi wekutanga mutungamiri weWTTC asi chinzvimbo chepamusoro pane chiri kubuda senzvimbo yekushanya nyeredzi yezana ramakumi maviri nemasere. Uye chiono chikuru sei kubva kuSaudi Arabia. Tichitarisira kuenderera mberi nehukama hwedu hwakasimba kufambira mberi nekushanya kwemamiriro ekunze neSaudi Arabia semutyairi mutsva wechiitiko chepasirese, "akadaro Muzvinafundo Geoffrey Lipman, purezidhendi, SUNx Malta
Cuthbert Ncube, Sachigaro weAfrican Tourism Board, akati: “Wow, zvinotyisa. African Tourism Board iri kutarisira kushanda naGloria nehumambo hweSaudi Arabia. Saudi Arabia inoita basa rakakosha mukushanya kwepasirese uye nyika dzekushanya nekushanya muAfrica yese. ”
Juergen Steinmetz, sachigaro, uye muvambi weWorld Tourism Network, akawedzera kuti: “Hazvina kuuya sekushamisika kutonga kubva pane zvandakaona muCancun. Pachinzvimbo cheWorld Tourism Network, ndinoda kukorokotedza Gloria Guevara nebasa rake idzva rakakosha. Chitsauko chedu cheWTN neboka rekufarira muSaudi Arabia pasi pehutungamiriri hwaHRH Dr. Abdulaziz Bin Naser Al Saud naVaRaed Habbis vanga vachishanda kubvira patakatanga hurukuro yedu pamusoro kuvaka.travel.
“Kuti Saudi Arabia isarudze Mai Guevara semupi wezano kugurukota zvinoratidza chinangwa chehumambo kuwana basa rayo idzva repasirese semutambi wezvekushanya nemutungamiri. Iyo zvakare inoratidza chinangwa chehumambo hwekutsungirira, kuenzana, uye hutungamiriri.
“Saudi Arabia yakaita mavhiza evashanyi kune vasiri maMuslim chokwadi COVID-19 isati yatanga. Iye zvino ichave iri yekutanga nguva iyo humambo kugona kugamuchira vatashanyi vekunze. Kupfuura nemudenda, Saudi Arabia yakashandisa mazana emamiriyoni kuvaka zvivakwa uye kugadzirira vashanyi. Saudi Arabia ine chiono chakajeka, uye mukana weshamwari yedu Gloria yekutamba chinzvimbo mukuita kuti chiratidzo ichi chive chinhu chakanakisa. Makorokoto. ”
Mashoko aGloria akazvininipisa anopfupikisa zvese: “Saudí anoda kubatsira kupora pasi rose uye akandikumbira kuti ndibatsire nazvo. Kuburitswa kwenhau kwakajeka.
Uku ndiko kudhindisa kwepakutanga:
Ministry of Tourism yeSaudi Arabia inozivisa kudomwa kwaGloria Guevera Manzo, achangopfuura CEO weWorld Travel and Tourism Council (WTTC), pachinzvimbo cheMukuru Special Advisor.
Semupi wezano rakakosha kuna Gurukota rezveKushanya, Gloria achatora makore anopfuura makumi maviri neshanu eruzhinji neruzhinji rwevashanyi ruzivo kubatsira kubatsira kufambidzana kwenyika dzese, kusimudzira hupfumi hwevanhu uye kubatsira mukuendesa kwehumambo, hukuru hwekudyara kwekudyara pasi pehumambo. Chiono 25.
Mufundisi Ahmed Al Khateeb vakatambira kugadzwa uku, vachiti: "Indasitiri yekushanya yeSaudi Arabia ine mikana inoshamisa uye iri kutotsigira kukura kwehupfumi nekusika kwemabasa muHumambo hwese, zvichiteerana neChiratidzo 2030 uye hutungamiriri hwaHM King Salman naHRH the Crown Prince.
“Tine nhaka yenyika yakasimba uye zviuru nezviuru zvenyaya dzekutaura. Gloria anounza hunyanzvi hwepasi rose uye hukuru hwepasi rose kubva panguva yake anomiririra nyika yese yekushanya uye yekufambisa seye CEO weWTTC uye ruzivo rwakananga nekushandura indasitiri yekushanya kubva panguva yake saMunyori weKushanya muMexico, izvo zvichatibatsira isu -kuwedzera mari mukushanya inoenda padanho rinotevera. "
Gloria Guevara Manzo akati: "Ndinoda kuve chikamu chekushandurwa uye kuita kuti chiono cheSaudi Arabia senzvimbo inotungamira yekushanya chiitike. Tourism ndiyo inonyanya kuvimbisa chikamu muSaudi Arabia; izvi zvave zvichionekwa kubvira 2019 apo Humambo hwakatanga kuvhurwa vashanyi vekunze uye ikava inokurumidza nekukurumidza kuita muKufamba neKushanya pasirese yepasi rose *.
"Muna 2020, hutungamiriri hweSaudi hwakaita basa rinoshamisa mukugadzirisa dambudziko reCOVID-19 nekuvaka kushanya kwayo kwepamusha vachiri kuenderera mberi nekumiririra kugadziriswa kweindasitiri yepasi rose uye kugadzirisa, uye ndine chivimbo chekuti makore angu mazhinji ehunyanzvi anogona kubatsira kukurumidza kuita zvinotevera chikamu chebudiriro, ”akaenderera mberi.
"Vanopfuura makumi mashanu muzana muzana vevashandi vepasirese vekushanya nekushanyirwa vanhukadzi uye Saudi Arabia iri kukurumidza kuwedzera kuwanda kwevanhukadzi, saka ndinovimbawo kusarudzwa kwangu kuchapa simba kuvakadzi vazhinji veSaudi kuita mabasa ekushanya, kushuvira zvinzvimbo zvehutungamiriri, uye zadzisa zvinangwa zveVision 50 zvekusimudzira vanhukadzi, ”akadaro Gloria.
Saudi Arabia yakawana kukurumidza kufambira mberi muindasitiri ichangoburwa; kutora chinzvimbo chinotungamira mukumutsiridza chikamu chekushanyirwa mushure me COVID-19 kuburikidza nemutungamiri wayo weG20, iyo yakawana chibvumirano chekubatana kubva kumarudzi anotora chikamu kuti vashande pamwe mukuvandudza zviitiko zvechokwadi zvekushanya; kuburitsa mavhiza anodarika mazana mana ezviuru zvekushanya mumwedzi mitanhatu yekutanga kubva pakatangwa chirongwa chayo chitsva chemavhiza evashanyi munaGunyana 400,000 nekuparura homwe yeSAR2019 bhiriyoni yezvekushanya uye chirongwa cheSAR400 bhiriyoni Yevashanyi.
Bazi rezveKushanya riri kutungamira kusimudzira kwechikamu ichi kuenda kuzvinangwa zveChiratidzo 2030 chekuwedzera mupiro wezvekushanya kuGDP kubva pa3% kusvika pamusoro pe10%, ichigadzira mamwe mabasa miriyoni imwe kune zvizvarwa zveSaudi uye kuwedzera huwandu hwevashanyi kusvika pamamirioni zana panosvika 100.
Ministry of Tourism yeSaudi Arabia
Bazi rezvekushanya reSaudi Arabia rinotungamira Saudi Arabia Tourism ecosystem, nerutsigiro kubva kuSaudi Tourism Authority uye neHurumende Yekuvandudza Fund.
Bazi rinoisa danho rezvekushanya kwehumambo uye rinotarisira kuvandudzwa kwemitemo nemirau, kusimudzira hupfumi hwevanhu, kuunganidza manhamba, uye kukwezva kudyara. Inoshanda yakabatana neSaudi Tourism Authority, iyo inosimudzira Saudi Arabia senzvimbo yepasi rese yekushanya, uye Tourism Development Fund, iyo inoita hurongwa hweInstitute hwekudyara nekupa mari yekusimudzira chikamu.
Yakatungamirwa naHuremekedzo Ahmed Al Khateeb, iyo Ministry yakavambwa muna Kukadzi 2020, zvichitevera kuvhurwa kweSaudi Arabia kune vekunze vekutandarira vatashanyi kekutanga munhoroondo yayo mu2019.Saudi Arabia inovavarira kugamuchira mamirioni zana kushanya kwekushanya na100, kuwedzera iyo mupiro wechikamu kuGDP kubva pa2030% kusvika pa3%.
About Gloria Guevara Manzo
Gloria Guevara Manzo ndomumwe wevakadzi vane mukurumbira mukushanya. Akashanda sa CEO weWorld Travel and Tourism Council (WTTC) kubva muna Nyamavhuvhu 2017 kusvika Kubvumbi 2021, achimiririra zvido zvevashandi vepasi rese veKufamba neKushanya uye achitungamira hurumende pamwe nekushambadzira kwemaindasitiri pamwe nekudyidzana kuti vagadzire marongero akanakisa uye zvirongwa zvekugadzira mabasa. , kudzikisira hurombo uye kudzoka kwemari kwenzvimbo uye nyika. Gloria akashanda seMunyori weKushanya kuMexico kubva munaKurume 2010 kusvika Mbudzi 2012, achitungamira chikamu chezvekushanya cheMexico kuburikidza nedambudziko rakapetwa katatu reH1N1, dambudziko remari uye nyaya dzekuchengetedza, kushandura indasitiri iri kunetsekana kuita chikamu chiri kuwedzera ichiunza vafambi mazana maviri kubva munyika dzinopfuura zana nemakumi mashanu kugadzira zviuru zvemabasa.